ဓမ္မဂင်္ဂါ: ဓမ္မဂင်္ဂါပါဠိသင်ခန်းစာ (၈)
ဒီနေ့တော့ ကာရက(Case) (၈)မျိုးအစုံသိရတော့မှာပါ..။ ဒီကာရကဆိုတာကို ရှေးရိုးသင်နည်းစနစ်မှာတော့ အလွန်ရှုပ်ထွေးကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာကြရတာပါ..။ သဒ္ဒါဆရာတွေရဲ့ အယူအဆအမျိုးမျိုးတွေကို အခြေပြုစာသင်သားတွေ ကျက်မှတ်ရတဲ့ အခါ သဒ္ဒါလန်သွားတတ်ပါတယ်..။ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကစ္စည်းသဒ္ဒါဟာ ပါရဂူဘွဲ့ယူကျမ်းစာလိုမျိုး သုတေသနအဆင့်မြင်မြင့် လုပ်ထားတဲ့ ကျမ်းကြီးမှန်း ခုမှ သိရတယ်..။ အခြေပြုစာသင်သားဘ၀က သင်ရတော့ ခေါင်းကိုက်သပေါ့လေ..။ အခုအချိန်မှ ပြန်ဖတ်မိတော့ အရသာရှိသား..။ (ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်က အငြိုးနဲ့မို့ သိပ်တော့ မကျေနပ်ချင်သေး..။)
(ခက်တာက ခုထိ မြန်မာ့ပါဠိသင်ရိုးမှာ ကိုရင်ငယ်လေးတွေ သုတေသနကျမ်းကြီးကို သင်ရိုးလုပ်ကျက်မှတ်နေကြရတာ သနားပေမယ့် ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေရသေးတယ်..။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ကလေးတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ သင်ရိုးစာအုပ်လေးတွေ အလွယ်တကူ ရေးလို့ ပြဌာန်းသင်ယူနေကြပြီ..။)
အာလုပ် (Vocative Case ) (အာလပနကာရက)
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဟေ့ ဘယ်သူရေ ဟေ့ ဘယ်ဝါရေ ခေါ်တာမျိုးကို အာလုပ်ပြုတယ်လို့ မြန်မာတွေ သိပါတယ်..။
ဘုရားရှင်က တပည့်သာဝကတွေကို အို ရဟန်းတို့ လို့ အာလုပ်ပြုတာ ခဏ ခဏ ကြည်ညိုကြရလေသကိုး..။ အဲဒီအာလုပ်ပုဒ်တွေ ပြုဖို့ဆိုရင် ဘာမှ ခက်လှတယ်မဟုတ်ဘူး...
အနည်းကိန်းမှာ ဘာမှ ဆက်ပေးစရာမလိုဘူး.. အများကိန်းမှာတော့ ကတ္တားပုဒ် အများကိန်းနဲ့အတူတူပဲ ဆက်ပေးရတယ်..။
သမဏ (အို ရဟန်း..)
သမဏာ (အို ရဟန်းတို့)
ကာရက (၈)မျိုးကို တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း ပြန်ဖတ်ကြစို့ရဲ့..
ပုရိသေန ပုရိသေဟိ ၊ ပုရိသေဘိ
ပုရိသသ္မာ၊ပုရိသမှာ၊ ပုရိသာ ပုရိသေဟိ၊ ပုရိသေဘိ
ပုရိသဿ၊ ပုရိသာယ ပုရိသာနံ
ပုရိသသ္မိံ၊ ပုရိသမှိ၊ ပုရိသေ ပုရိသေသု
လေ့ကျင့်ခန်းတော့ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် မြန်မာလို ဘာသာပြန်ကြည့်ပေါ့..
ဗြဟ္မဏော သဟာယကေန သဒ္ဓိံ ရထမှိ နိသီဒတိ။
အသပ္ပုရိသာ စောရေဟိ သဟ ဂါမေသု စရန္တိ။
၀ါဏိဇော ကဿကဿ နိဝါသေ ဘတ္တံ ပစတိ။
ဘူပါလဿ အမစ္စာ ဒီပေသု မနုေဿ ရက္ခ န္တိ။
သုဂတဿ သာဝကာ ၀ိဟာရသ္မိံ ၀သန္တိ။
မက္ကဋော ရုက္ခမှာ အာဝါဋသ္မိံ ပတတိ။
သုရိယဿ အာလောကော သမုဒ္ဒသ္မိံ ပတတိ။
ကဿကာနံ ဂေါဏာ ဂါမေ အာဟိဏ္ဍန္တိ။
ဝေဇ္ဇဿ ဒါရကော မဉ္စသ္မိံ သယတိ။
ဓီဝရာ သမုဒ္ဒသ္မာ ပိဋကေသု မစ္ဆေ အာဟရန္တိ။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 6:31 PM
Where are you now? When will you continue
Pali again. I am still waiting for your next Lecture. Don't leave like this.
Please. continue your Pali lec: